यसरी भाग्यमानी प्रधानमन्त्री ओली ! « Ok Janata Newsportal
यसरी भाग्यमानी प्रधानमन्त्री ओली !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यद्यपि यसअघि पनि ओलीले मुलुकको प्रधानमन्त्रीत्व सम्हाली सकेका छन् ।
अहिले दुई कम्युनिष्ट वामघटक एक भएर नेकपा गठन भएको छ । सात दशकपछि नेपाली कम्युनिष्टको बिरासत फर्किएको छ । भारतको कोलकत्तामा कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले गठन गरेको पार्टी आज आएर विशाल पार्टी बनेको छ । त्यसको मुख्य भूमिकामा प्रधानमन्त्री ओली छन् ।
मुलुकका विभिन्न परिवर्तनमा प्रधामनन्त्री ओलीले खेलेका भुमिका, उनको योगदान कम्ती छैन, तैपनि यस्तै योगदान दिएका धेरै व्यक्तिले उनीजस्तो विरासत बिरलै पाउँछन् । पछिल्लो समय अध्यादेश ल्याएर विवादमा आएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँगको सीमा विवादको मुद्धालाई उठाएर त्यसको पटाक्षेप गरे । हुनत, भारतले २०७२ सालमा गरेको ९ महिने नाकाबन्दीमा प्रधानमन्त्रीले लिएको अडान राष्ट्र हीतमै केन्द्रीत थियो ।
अहिले कोरोना त्राहीमाममा सरकारको अलोकप्रियता चुलिरहेका बेला पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न जुक्तिले त्यसको पटाक्षेप गरेका छन् । पार्टीभित्रै बाट पनि बहुमत नेताहरुले सच्चिन आग्रह गर्दा समेत शक्तिशाली बनेर उदाइरहे । अन्तत्वगत्व आफू बलशाली नै रहे ।
अहिले नेकपाभित्र विभिन्न कुण्ठा उत्पन्न भएको छन् । त्यसको पूर्णज्ञान प्रधानमन्त्रीलाई छ तर उनी अहिले नेपालमा रेल भित्र्याएर अर्को चर्चा बटुल्दै छन् । यी यावत् श्रृंखलाले पार्टीभित्रका विभिन्न असहमति एकपछि अर्को गर्दै तुहेर जान थालेका छन् ।
अहिले नेकपाका विभिन्न बैठक, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति, सचिवालय बस्ने टुंगो छैन । यसरी पार्टीका गतिविधिलाई आफ्नो वरिपरि पार्न उद्दत बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले चाँडै नेकपालाई निकास दिनु आजको आवश्यकता हो । दुवै अध्यक्ष मिलेर लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।